Voka-pifidianana vonjy maika, fifidianana filoham-pirenena 2018 – Fihodinana faharoa.
Mpifidy voasoratra anaty lisi-pifidianana : 9 913 599.
Tonga naneho ny safidiny : 4 767 697 (48,09%).
Vato manankery : 4 648 086.
Vato maty : 78 465.
Vato fotsy : 41 146.
Rajoelina Andry Nirina : 2 587 035 (55,66%).
Ravalomanana Marc : 2 061 051 (44,34%).
Isaorako ny CENI sy ireo andrim-panjakana ary ireo rehetra niara-nisalahy nahatontosa iny fifidianana iny. Tonga eo amin'ny kihon-dalana hanova ny tantarany i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy saingy tsy maintsy mbola handrasantsika amim-pitoniana sy amim-pahendrena tanteraka ny fanapahan'ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana.
Am-pitiavana no anomezako fotoana anareo ny Alahady 16 Desambra 2018 eo amin'ny Gara Soarano amin'ny 10 ora maraina. Hiara hanao diabe volom-boasary isika, hamakivaky an'Antananarivo hizara fitiavana, haravona sy fanantenana.
Filoham-pirenena toa ahoana no mety amin’ny Malagasy ? Ary vinam-pampandrosoana toa ahoana no hahavaha ny olana fototra sy madinika misy eto amin’ny firenena?
Samy niaiky ireo kandidà sy solotenan’ny kandida tonga teny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalam-panorenana androany,fa tsy tomombana antsakany sy andavany iny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany iny.